Waa maxay caqabadaha ku hor-gudban doorashooyinka 2021? | KEYDMEDIA ONLINE
Waa maxay caqabadaha ku hor-gudban doorashooyinka 2021?
Rooble ayaa sameeyay dedaallo wax ku ool ah, laakiin wali wax badan ayaa u dhiman inuu ku dhameystiro mudo kooban.
MUQDISHO, Soomaaliya - Doorashadda Soomaaliya ayaa ku dhacday ceel dheer oo Farmaajo ku riday, waxayna qaadanaysaa waqti badan in la xaliyo caqabadaha ciida ka badan ee kuhor gudban, oo looga fadhiyo RW Rooble.
Tan iyo May 27, Xafiiska Rooble ayaa qabtay hal shaqo oo ah inuu soo dhameystiray Gudiyadda Doorashooyinka Heer Federaal iyo Heer Maamul Goboleed, iyadoo aan wali la guda galin arrimaha waaweyn ee khilaafka ka jiro.
Caqabadaha waqtiga qaadanaya xalintooda waxaa kamid ah:
1 - Maamul u sameynta degmada Garbahaarey, oo ah degaan doorashadda ugu dhibka badan Jubbaland.
2 - Amniga Beledweyne, oo Jeneraal Xuud diidan yahay in doorasho lagu qabto.
3 - Dhaqaalaha doorashadda oo wali aan gacanta ku jirin, lagana sugayo deeq-bixiyaasha.
4 - Amniga goobaha doorashooyinka iyo kaalinta NISA ku yeelan doonto oo muran ka taagan.
5 - Doorashadda gudoonka gudiga doorashadda Somaliland, oo Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi ay isku hayaan.
Waxaa hubaal ah in Rooble uusan waqtiga yar ee u haray  maalmood uusan kusoo afjari karin xalka khilaafaadkan taagan, sidoo kalena su'aallo badan ayaa la iska waydiinayaan hufnaanta doorashadda, maadaama faragelinta Farmaajo iyo Fahad ay wali socoto.
Rooble ayaa Maanta kasoo laabtay safar afar maalin qaatay oo Kismaayo iyo Garbahaarey ku tagey, isagoo Axmed Madoobe iyo bulshada Gedo kala hadlay maamul u sameynta Garbahaarey, oo xubinihii noqon lahaa lasoo saarey, balse aan la magacaabin.